Qaraxyada Shabaab qolona u gaar ma aha!! | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Dad badan ayaa aaminsanaa in Shabaab ay raadsadaan dad gaar ah ama ay Qaraxyo la beegsadaan goobo cayiman. Inkasta oo hadda Shacabka Soomaaliyeed badankood ay fahmeen in shabaab ay ka go’an tahay xasuuqa Umadda Soomaaliyeed yar iyo weyn, caruur iyo ciroole, haddana qaarkeen ayaa aaminsan in shabaab aanu dooneyn oo marka arimaha qaarkood aad kala hadasho ku oranaya “saaqaas ha i galin” imisa ayaanan saaq galin haddana saaq la’aan la xasuuqay?
Dib iila milicso qaraxyada Shabaab ay ku bar-tilmaameedsadeen maatada iyo indhaha Bulshada.
Caawa toddobadii fiidnimo waxa ay weerar ka geysteen isgoyska Saddexda geed ee Shangaani, waxaa ku dhintay Lix qof oo uu ku jiray canug yar. Isgoyskaas waxaa ku shaaxeyn jiray dhalinyarada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan. Waxaa goobta ku shaaxeyn jiray dhalinyaro wax baratay oo badankood shaqo la’aan ah, kuwaa oo ka sheekeysta waqtiga iyo waayaha nolosha.
Waxaa ka sii horeeyay Qaraxii Maqaayadda Luul Yamani oo ah maqaayad ay ku caweyn jireen dhalinyaro aqoon yahano ah. Luul Yamani waxa ay aheyd maqaayad ay isku ballansadaan dadka Indhaha Bulshada ah maaddaama ay aheyd goob bilicdeedu wanaagsanayd, aadna loo habeeyay. Falkii isqarxinta ee ay ka fuliyeen naftood haligayaashu maqaayaddaas waxaa ku naf waayay labaatameeyo kuligood ahaa indhaha Bulshada.
Aqriste aniga uun yaanan kaaga sheekeyn qaraxyada calool taabadka ah ee ka dhacay dalkeena kuwaa oo aan ku weynay dad aanan mudneyn geerida ama ugu yaraan aan jecleen in intaa ka badan ay u noolaadaan dalkooda iyo dadkooda. Bal ilbiriqsiyo ka feker… dib u milicso qaraxyadii xad-dhaafka ahaa. Waan filayaa in aad xasuusatay hebel, hebelaayo iyo hebelo kale oo badan!!.
Khawaarijta Al Shabaab waxa ay dil la doonayaan aniga, adiga iyo dhamaan Umadda Soomaaliyeed. Cidna uma kala soocna oo waxa ay si silac ah u dileen Hooyo miis la fadhiday khudaar si ay u maareyso nolosha ciyaalkeeda aanay u maqneyn cid aanan alle ka ahayn. Waxa ay sababeen in hilibkiisa la isku aruuriyo Aabe Soomaaliyeed oo bagaash jidka la dhinac fadhiyay si uu u shaqaysto risqi xalaal ah oo nolosha reerkiisa ku maareeyo.
Ma ilaawi karayo. kaligey ma aha ee adba waad ilaawi la’ dahay. Waxa aad si weyn oo uurku-taalo leh u xasuusataa Qaraxii dhamaadka sanadkii tagay ka dhacay maqaayadda Jalato davino, maya, malaha waxaa kaaga xanuun badanaa Qaraxii dhamaadka sanadkii ka horeeyay ee Isgoyska Ex-Contarool Afgooye kaa oo ay ku shahiideen Ubixii dalka ee Jaamacadda u kalahayay, mise waxa aad xasuustaa Qaraxii 14-Oktoobar ee Soobe? Malaha waxaa kaaga sii darnaa Qaraxii toban sanadood ka hor ahaa ee Hargaha iyo Saamaha kaa oo lagu xasuuqay boqolaal arday Jaamacado dalka Turkiga ah loo soo aqbalay? Shaamoow miyaad ilowday?
Haddii aan iraahdo waxa aan tirinayaa qaraxyadii ay shabaab inagu xasuuqeen tan iyo markii ay dalka ka bilowdeen tiro ma leh. Tiris qarax kama gaarno ee aan isla xisaabno Imisa ayey dhuumaaleysi ku dileen? Tan ayaaba ka daran ayaad is tiri sowma aha?
Midna xisaabi kari mayno saaxiib, waxaase hubaal ah in kuwaa iyo kuwo la mid ah ba ay ina soo mari doonaan inta aan caqliyaddii hore ku wajahayno Shabaab oo caqligoodu yahay daadinta dhiigeena.
Dadka inooga baxay gacanta argagixisadu waa Shuhado oo Alle ayaan uga rajaynayaa in uu Janadiisa Fardowso ku casuumo, laakiin anaga nool maxaa inoo qorshe ah? Ma dilka iyo duleynta Shabaab oo degdeg ku soo gabagabayn karo haddaan is garabsano ayaan sugnaa mise dhiig ayeynu isku yeelnaa oo Shabaab iyo Shabaab kalkaalba shiirkole ayeynu geynaa? Jawaabta waa adiga.
Previous articleRW Rooble oo cambaareeyey falkii cadawtinimada ahaa ee argagixisadu caawa ka geysteen Degmada Shangaani.
Next articleCiidanka Xoogga oo la wareegay fariisimo ay ku sugnaayeen Al-shabaab.
Mohamed Abdukadir Socdaal - March 28, 2021 0
Eebbe weyne ha janneeyo, ...